कोरोना स during्कट को समयमा व्यापार ठाउँ भाडामा - Law & More B.V.
कोरोना स during्कटको बखत व्यापार स्थानको भाँडा
सम्पूर्ण विश्व हाल अकल्पनीय मापदण्डमा संकटको अनुभव गर्दैछ। यसको अर्थ यो हो कि सरकारहरूले पनि असाधारण उपायहरू लिनुपर्दछ। यस अवस्थाले निम्त्याएको क्षति र हुन जारी रहनेछ ठूलो हुन सक्छ। तथ्य यो हो कि वर्तमानमा कोही पनि स of्कटको मापन मूल्या assess्कन गर्ने स्थितिमा छैनन्, न त यो कति लामो समय सम्म रहनेछ। परिस्थिति जस्तोसुकै भए पनि, व्यवसाय परिसरको पट्टिहरू अझै कार्यान्वयनमा छन्। यसले धेरै प्रश्नहरू खडा गर्दछ। यो लेखमा हामी केहि प्रश्नहरूको उत्तर दिन चाहन्छौं जुन भाडादारहरू वा व्यवसाय परिसरको घरमालिकहरूसँग आउँदछन्।
के तपाई अझै भाडा तिर्नु पर्छ? यस प्रश्नको उत्तर केसको परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ। जे भए पनि दुईवटा अवस्था छुट्याउनै पर्छ। सर्वप्रथम, व्यवसाय परिसर जुन अब व्यावसायीक उद्देश्यका लागि प्रयोग हुन सक्दैन, जस्तै रेस्टुरेन्ट र क्याफेहरू। दोस्रो, त्यहाँ पसलहरू छन् जुन अझै खुला हुन सक्छ, तर जसले आफैं आफैं ढोका बन्द गर्न छनौट गर्दछन्।
भाडामा लिने भाडा तिर्न बाध्य छ। यदि यस्तो हुँदैन भने, यो सम्झौताको उल्ल .्घन हो। अब प्रश्न खडा हुन्छ, के त्यहाँ बल दराज हुन सक्छ? हुनसक्छ त्यहाँ किरायेदारी सम्झौतामा परिस्थितिहरू बारे सम्झौताहरू छन् जसमा बल majeure लागू हुन सक्छ। यदि होईन भने कानून लागु हुन्छ। कानूनले भन्छ कि त्यहाँ फौज मजदुर छ यदि भाडामा लिने गैर-अनुपालनको लागि जिम्मेवार हुन सक्दैन; अर्को शब्दमा यो भाँडा तिर्न नसक्ने भाडेकको गल्ती होईन। यो अस्पष्ट छैन कि कोरोनाभाइरसको कारण दायित्वहरू पूरा गर्न असफल भएमा परिणाम माजेयर हुन्छ। यसका लागि कुनै उदाहरण छैन, यो अवस्थामा के हुन्छ भनेर न्याय गर्न गाह्रो छ। के ले एक भूमिका निभाउँदछ, तथापि, भाडा सम्बन्धको यस प्रकारको बारम्बार प्रयोग गरिएको आरओजेड (रियल इस्टेट काउन्सिल) सम्झौता हो। यस सम्झौतामा, भाँडा घटाउनको लागि दावीलाई मानकको रूपमा हटाइएको छ। प्रश्न यो छ कि एक घरमालिकले वर्तमान स्थितिमा यथोचित दृष्टिकोणको दृष्टिकोण राख्न सक्छ।
यदि भाँडादारले आफ्नो पसल बन्द गर्न छनौट गरे, स्थिति फरक हुनेछ। यद्यपि त्यहाँ हाल कुनै दायित्व छैन, वास्तविकता यो छ कि त्यहाँ कम आगन्तुक छन् र त्यसकारण कम लाभ। प्रश्न यो हो कि परिस्थिति पूर्ण रूपमा भाँडादारको खर्चमा हुनुपर्दछ। यस प्रश्नको स्पष्ट उत्तर दिन सम्भव छैन किनकि हरेक अवस्था फरक हुन्छ। यो केस-द्वारा-केस आधारमा मूल्या must्कन गर्नुपर्दछ।
भाडामा लिने व्यक्ति र घरमालिकले दुबै अप्रत्याशित परिस्थिति निम्त्याउन सक्छ। सामान्यतया, आर्थिक संकट उद्यमीको तर्फबाट जवाफदेही छ, यद्यपि प्राय जसो केसहरूमा यो कोरोना संकटको कारण फरक हुन सक्छ। सरकारले कार्यान्वयन गरेका उपायहरुलाई पनि ध्यानमा राख्न सकिन्छ। अप्रत्याशित परिस्थितिमा आधारित दावीले लिजलाई संशोधन वा अदालतले रद्द गर्ने अवसर प्रदान गर्दछ। यो सम्भव छ कि एक भाँडादार अब सम्झौताको निरन्तरताका लागि उचित तरिकाले समात्न सकीदैन। संसदीय इतिहासका अनुसार न्यायाधीशले यस विषयमा संयम राख्नु पर्छ। हामी अब यस्तो अवस्थामा पनि छौं कि अदालतहरू पनि बन्द छ: त्यसैले चाँडै फैसला प्राप्त गर्न सजिलो हुँदैन।
भाडा सम्पत्तीमा कमी
भाडामा लिने व्यक्तिले भाँडामा क्षतिपूर्ति वा क्षतिपूर्ति नभएमा क्षतिपूर्ति दिन सक्दछ। सम्पत्ती वा अन्य कुनै शर्तको अभावमा भाडामा लिने भाडामा नहुँदा परिणाम भाँडादारसँग भाडा सम्झौताको सुरूमा हकदार हुन्छ। उदाहरण को लागी, एक अभाव हुन सक्छ: निर्माण दोष, एक चुहावट छत, मोल्ड र एक आपतकालीन निकास को अभाव को कारण शोषण अनुमति प्राप्त गर्न असमर्थ। अदालतहरू सामान्यतया यो निर्णय गर्न उत्सुक हुँदैनन् कि त्यहाँ त्यस्तो परिस्थिति छ जुन घर मालिकको खाताको लागि हुनुपर्दछ। जे भए पनि, सार्वजनिक अभावका कारण खराब व्यवसाय त्यस्तो परिस्थिति होइन जुन घर मालिकलाई चार्ज गरिनु पर्दछ। यो उद्यमी जोखिमको एक हिस्सा हो। के यसले एक भूमिका पनि खेल्दछ कि धेरै केसहरूमा भाडा सम्पति प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसैले थप रेस्टुरेन्टहरू, वितरण गर्दै छन् वा उनीहरूको खाना वैकल्पिकको रूपमा लिइएको छ।
अधिकांश व्यवसाय परिसरको लीजहरूमा एक अपरेटिंग बाध्यता समावेश गर्दछ। यसको मतलब भाडादारले भाडाको व्यवसाय परिसर प्रयोग गर्नु पर्छ। विशेष परिस्थितिहरूमा, शोषणको दायित्व कानूनबाट उठ्न सक्छ, तर यो सधैं केस हुँदैन। व्यापार र कार्यालय परिसरको सबै जमींदारहरू ROZ मोडेलहरूको प्रयोग गर्छन्। आरओजेड मोडेलहरूसँग सम्बन्धित सामान्य प्रावधानहरूले भाँडादारले भाडामा लिने ठाउँ "प्रभावकारी, पूर्ण, उचित र व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्दछन्" भनेर उल्लेख गर्दछ। यसको मतलव भनेको भाडामा लिने अपरेटिंग दायित्व हो।
हालसम्म नेदरल्याण्डमा शपिंग सेन्टर वा अफिसको ठाउँ बन्द गर्ने कुनै साधारण सरकारी उपाय छैन। यद्यपि सरकारले घोषणा गरेको छ कि सबै स्कूलहरू, खाने र पिउने प्रतिष्ठानहरू, खेलकुद र फिटनेस क्लबहरू, सौना, सेक्स क्लबहरू र कफी पसलहरू अर्को सूचना नभएसम्म देशव्यापी रूपमा बन्द रहनुपर्दछ। यदि भाडामा लिने व्यक्तिले भाडामा लिने सम्पत्ति बन्द गर्न सरकारको आदेशबाट बाध्य छ भने, भाडामा लिन यसको लागि उत्तरदायी हुनेछैन। यो यस्तो अवस्था हो जुन वर्तमान राष्ट्रिय अवस्था अनुसार भाँडादारलाई जिम्मेवार मान्नु हुँदैन। सामान्य प्रावधान अन्तर्गत, किराएदार पनि सरकारी निर्देशन पालन गर्न बाध्य छ। एक रोजगारदाताका रूपमा उनी सुरक्षित काम वातावरण सुनिश्चित गर्न पनि बाध्य छन्। यो दायित्व कोरोनाभाइरसको दूषितताको जोखिममा कामदारहरूको पर्दाफास नगरी व्युत्पन्न हुन्छ। यी परिस्थितिहरूमा, घरमालिकले भाडामा लिने काम गर्न बाध्य गर्न सक्दैन।
कर्मचारी र / वा ग्राहकहरूको स्वास्थ्य सेवाको कारण, हामी देख्छौं कि भाडादारहरूले आफैंले भाडामा लिने सम्पत्ति पनि स्वेच्छाले बन्द गर्ने छनौट गर्छन्, यदि उनीहरूलाई सरकारले निर्देशन दिएका छैनन् भने। हालको परिस्थितिमा हामी विश्वास गर्छौं कि जमिन्दारहरूले दायित्व पूरा गर्न, जरिवाना तिर्ने वा क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने दाबी गर्न सक्षम हुने छैनन्। तर्कसंगतता र निष्पक्षताका साथै भाँडादारको क्षतिलाई यथासम्भव सीमित गर्ने दायित्वको आधारमा हामी कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छौं कि घरमालिकले (अस्थायी) बन्द हुने कुरामा आपत्ति जनाउनेछ।
भाडा सम्पत्तीको बिभिन्न प्रयोग
खाना र पेय प्रतिष्ठानहरू यस समयमा बन्द छन्। जे होस्, यो अझै पनी उठाउने र खाना पुर्‍याउने अनुमति छ। जहाँसम्म, एक भाडा सम्झौता प्राय: एक कडा उद्देश्य नीति प्रदान गर्दछ; के एक रेस्टुरेन्ट देखि उठाउँदा फरक बनाउँछ। नतिजाको रूपमा, एक भाडामा लिने भाडा सम्झौताको विपरित कार्य गर्न सक्दछ र - सम्भवतः - जरिवाना जरिवाना।
वर्तमान स्थितिमा, सबैजनाको कर्तव्य छ कि उसले सकेसम्म उसको क्षतिलाई सीमित राख्नु पर्छ। एक पिक-अप / डिलिभरी प्रकार्यमा स्विच गरेर, एक किरायदारले स्वीकार गर्दछ। यी अवस्थाहरूमा, यो दृष्टिकोणको रक्षा गर्न सबै व्यावहारिकतामा गाह्रो छ कि यो सम्झौताको उद्देश्यको विपरित हो। वास्तवमा, एक घरमालिकले भाडामा दाबी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ यदि भाँडादारले आफ्नो व्यवसायमा भाँडा तिर्न सक्षम भइरहन्छन् भने यसको सबै शक्ति प्रयोग गर्दैन।
अर्को शब्दहरुमा, सबै जना आफ्नो क्षति यथासम्भव सीमित गर्न बाध्य छन्। सरकारले उद्यमीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन र उनीहरूको वित्तीय दबाब कम गर्न दुर्गम उपायहरूको घोषणा गरिसकेको छ। यी उपायहरूको सम्भावनाहरू प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। यदि एक किराएदारले त्यसो गर्न मानेन भने, यो जग्गा मालिकलाई घाटा पार गर्न गाह्रो मानिन्छ। यो उल्टो पनि लागू हुन्छ। यसैबीच, राजनीतिज्ञहरूले पनि आउँदो अवधिमा भाँडालाई मध्यम गर्न जग्गा मालिकहरूलाई आग्रह गरेका छन्, ताकि जोखिम साझा गरिएको छ।
यद्यपि भाँडादार र घरमालिकको आपसमा सम्झौताको सम्बन्ध छ र 'एक सम्झौता भनेको एक सम्झौता हो' भन्ने सिद्धान्त हो। हामी एक अर्कासँग कुरा गर्ने र सम्भावनालाई हेर्ने सल्लाह दिन्छौं। भाँडादार र घरमालिक यी अपवादात्मक समयमा एक अर्कालाई भेट्न सक्षम हुन सक्छन्। जबकि भाडावालाको बन्दको कारणले कुनै आय छैन, घर मालिकको खर्च पनि जारी छ। यो सबैको चासोमा छ कि दुबै व्यवसायहरू बाँच्न र यस स overcome्कटलाई पार गर्न। यस तरिकाले, किराएदार र घरमालिक सहमत हुन सक्छन् कि भाँडा अस्थायी रूपमा आंशिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ र कमीमा समातिनेछ जब व्यवसाय परिसर फेरि खोल्दछ। हामीले एक अर्कालाई सम्भव भएमा सहयोग गर्नुपर्नेछ र यसका साथै, घरमालिकहरूले दिवालिया भाडावालहरूबाट फाइदा लिन सक्दैनन्। जे भए पनि, नयाँ समयमा त्यहाँका भाँडाकुँडाहरू सजिलै भेटिदैनन्। तपाईले जे पनि छनौट गर्नुभयो, हतारमा निर्णय नगर्नुहोस् र हामी तपाईंलाई सम्भावनाहरूको बारेमा सल्लाह दिन्छौं।
किनकि वर्तमान स्थिति यति अप्रत्याशित छ, हामी कल्पना गर्न सक्छौं कि यसले तपाईंको लागि धेरै प्रश्नहरू खडा गर्न सक्दछ। हामी घटनाक्रमको नजिक नजर राख्छौं र तपाईंलाई भर्खरको मामिलाको बारेमा सूचित गर्न पाउँदा खुशी छौं। यदि तपाईंसँग यस लेखका बारे कुनै प्रश्नहरू छन् भने कृपया वकिलहरूको सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Law & More.
अर्को डिजिटल हस्ताक्षर र यसको मूल्य »
पछिल्लो Ruptcy दिवालियापन अनुरोध